Superfine 3000mesh talc vovoka vidin'ny vovoka talcum vovoka ho an'ny loko / coating
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-18
Toetran'ny talc vovoka: lubricity, anti-sticky, mikoriana fanampiana, afo fanoherana, asidra fanoherana, insulation, avo lenta, simika tsy mavitrika, hery manafina tsara, malefaka, tsara gloss, adsorption mahery, sns Ny talc vovoka: industrail grade, kilasy kosmetika sns. &nb...
Vidiny vidy mainty vato volkano lava rock grill ho an'ny fandrahoan-tsakafo
Famaritana: Vato volkanika fantatra amin'ny anarana hoe pumice na basalt porous, karazana fitaovana miasa sy tontolo iainana izy io. Ahitana mineraly sy microelements am-polony izy io, toy ny sodium, magnesium, aluminium, silisiôma, calcium, titane, manganese, vy, nikela, kobalta ary molybdène sy ny sisa...
Loko fasika amoron-dranomasina fasika loko quartz fasika mifangaro miloko voajanahary miloko fasika quartz ankizy loko dobo taila ho an'ny gorodona
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-11
Color fasika dia manan-danja indostrialy mineraly akora, be mpampiasa amin'ny fitaratra, fanariana, seramika sy refractory fitaovana, metallurgy, fanorenana, simika orinasa, plastika, fingotra, abrasives sy ny indostria hafa. 1. Glass: Ny akora fototra amin'ny fitaratra fisaka, fitaratra mitsingevana, vokatra fitaratra ...
Afangaroy ambongadiny Sira mena voajanahary blocs taila tanimanga Himalayan Salt Brick amidy
Manana jiro sira himalaya izahay, biriky sira, savony sira, solaitrabe misy sira, fanaovan-jiro sira, fasika sira, sakana sira, sns Ireo vokatra ireo dia vita amin'ny sira voajanahary avy any Himalyasia. voajanahary sy fahasalamana. Ny sira rock Himalayan dia sira amin'ny vatolampy Himalaya. Ny sira rock Himalaya dia misy mihoatra ny 98% sodium c...
Ny mpanamboatra dia manome vato manjelanjelatra ho an'ny fambolena trondro aquarium, vato manjelatra ho an'ny paving gardening sy ny landscaping.
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-12
Vato mamirapiratra Vina mora vakana mamirapiratra, vatokely manjelanjelatra ho an'ny paving zaridaina. Vato mamirapiratra: Rehefa avy notarihin'ny hazavana hita maso toy ny tara-masoandro sy ny hazavana, ny vato mamirapiratra dia mitroka sy mitahiry angovo, izay mety hamirapiratra ara-boajanahary ao anaty haizina mandritra ny fotoana maharitra, ary ny vokatra dia misoroka ny l...
Vidin'ny graphite voajanahary azo itarina isaky ny kilao ny vovoka grafit ho an'ny indostrian'ny famehezana
Ny anjara asan'ny graphite: azo ampiasaina ho toy ny anti-wear agent sy lubricant. Ny graphite madio indrindra dia ampiasaina ho mpandrindra neutron amin'ny reactor atomika. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana crucibles, electrodes, borosy, bateria maina, fibra graphite, mpanakalo hafanana ary coolers. , lafaoro arc elektrika, arc l...
Tilikambo sira rock Himalayas Boky sira mavokely 8x4x2
Ny vokatry ny biriky sira kristaly: Volatilize ny ion ratsy, mamelombelona ny rivotra ary manamaivana ny havizanana. Ny fanandramana dia naneho fa rehefa avy nafanaina ny sakana sira kristaly, dia afaka manova ny ions ratsy, izay vitaminina amin'ny rivotra, izay afaka manatsara ny kalitaon'ny rivotra sy mandrindra ny fihenjanana, toy ny ...
SiC mainty/maitso silisiôma carbide ho an'ny sandblasting
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-03
Silicon carbide (SiC) dia vita amin'ny fandrendrehana mari-pana ambony ao anaty lafaoro fanoherana misy akora toy ny fasika quartz, coke petrole (na coke arintany), poti-kazo (ilaina ny sira mba hamokarana karbida silisiôma maitso). Silicon carbide koa dia misy amin'ny natiora, mineraly tsy fahita firy, moissanite. Silicon carbid ...
Ion-negatif vovoka miaraka amin'ny famoahana ion-negatif, lavitra-infrarouge miaraka amin'ny vidiny mora
nataon'ny admin tamin'ny 21-07-19
Ny vovoka ion négatif dia karazana mineraly mitambatra izay novolavolaina na ampitaina amin'ny olombelona amin'ny fampiasana ny fitsipiky ny famokarana ion ratsy amin'ny natiora. Amin'ny ankapobeny dia vovoka tourmaline + singa lanthanide na singa tsy fahita firy izy io. Ny ampahany amin'ny singa tsy fahita firy dia be ...
Vovoka akora misy kalsinina ho an'ny loko
nataon'ny admin tamin'ny 21-07-08
Ny vovony akorandriaka dia manondro ny vovony vita amin'ny fanorotoroana sy fikosoham-bary. Ny 95% amin'ireo akora ao aminy dia karibonetra kalsioma, chitin, ary asidra amine sy polysaccharides kely. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana avo lenta ho an'ny sakafo, kosmetika ary haingon-trano anatiny, ary ampiasaina amin'ny biby fiompy sy poult ...
Food Grade Diatomite Powder Diatomaceous Earth Powder Celite 545 amidy
Ny tany diatomaceous dia karazana vato sedimentary siliceous biogène, indrindra ahitana sisan'ny diatomy fahiny. Ny singa simika ao aminy dia SiO2 indrindra, misy Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, P2O5 ary zavatra organika kely. Ny tena fampiasa amin'ny diatomite dia fanampiana sivana, famenoana, ad...
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-29
Ny vovony akorandriaka dia manondro ny vovony vita amin'ny fanorotoroana sy fikosoham-bary. Ny singa 95% ao aminy dia karibonetra kalsioma, chitin, ary asidra amine sy polysaccharides kely. Azo ampiasaina ho fitaovana avo lenta ho an'ny sakafo, kosmetika ary haingon-trano anatiny, ary ampiasaina amin'ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona....
123 Manaraka > >> Pejy 1/3
Adiresy: faritra ambanivohitr'i Shikan, Ciyu Town, lingshou County, Shijiazhuang, Hebei, Sina